ASUS ithebhulethi akufakwanga: zokuxazulula inkinga kungenzeka. ASUS yokulungisa I-Tablet
Amagajethi esiyingxenye ebalulekile zokuphila kwanamuhla. Kodwa nabo ngokuvamile kakhulu abe izinkinga ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, ngezikhathi ezithile, abasebenzisi bakhononda ngokuthi abazange kuhlanganisiwe ASUS ithebhulethi. Kanjani ukuba ngibe kulesi simo? Kungani kwenzeka lezi zinkinga? Konke lokhu kumele ukwazi umsebenzisi ngamunye. Khona-ke ujike ngaphandle nzima kakhulu ukulungisa iyunithi. Kuphela kwezinye izimo kubalulekile ubheke ngokuqondile service izikhungo zobuchwepheshe. Ngokuvamile abakwazi kuma-akhawunti abo nezinkinga. Ngakho kungani ASUS thebhulethi uvala noma vula?
Imihlobo ehlukeneko izinkinga
Okokuqala kufanele siqonde ukuthi zonke izinkinga zenzeka amagajethi ifundelwe. Ngisho lokhu uhhafu ukuxazulula lesi simo.
Zonke izinkinga amaphilisi kanye namanye amadivayisi yesimanje zingahlukaniswa zibe:
Uhlobo lokuqala - phetho ezihlukahlukene ukwehluleka software eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa. Ngenxa yalo msebenzi kuba amadivayisi eziphukile. Ngokuvamile, kungaba lezi zinkinga ixazululwe ngokuthi ufaka isofthiwe nezilungiselelo negajethi.
Eyesibili uhlobo izinkinga ezibangelwa ukushada noma uhlobo oluthile umonakalo yezingxenye ithebhulethi. Lokhu ukuqondanisa ngokuvamile kudinga ukulungisa obuphelele. Futhi kuphela ezimweni ezingajwayelekile zingaxazululwa ngokuzimela. Ngokuvamile nezinkinga hardware Kudingeka sikhiqize professional ukulungisa i-tablet inkonzo ASUS izikhungo.
Manje okuncane mayelana izizathu amagajethi ayikwazi kuhlanganisiwe. Ikakhulukazi, izibhebhe ezazisezandleni ASUS. Inkinga yokuqala evame kakhulu phakathi kwabasebenzisi. Kodwa imbangela ngeke kukhonjwe nohlobo hardware noma isofthiwe. Kungani?
Ngenxa edivayisini ithebhulethi kubangelwa ukunganaki yomnikazi. Ukuze uqale, ningatatazeli. Udinga ukuhlola ibhethri. Uma kungenjalo, khona-ke kusimangaze ukuthi akusho ukuvula ASUS ithebhulethi (noma iyiphi enye) akudingekile. Futhi le nkinga uzonyamalala - icala battery yanele.
Ukuze uhlole ukuthi noma cha into alwanele kwebhethri, kudingeka ukuba uxhume igajethi kunethiwekhi. Futhi ukuzama ukufeza umsebenzi nedivaysi. Lapho ifakiwe, baye nje ukuqapha eduze kangakanani icala kusala ibhethri.
Kodwa lokhu kumane nje kuyisiqalo loko. Inkinga elilandelayo kwenzeka kaningi kakhulu. It has a umsuka hardware. Uma ASUS ZenPad ithebhulethi (noma iyiphi enye) owenqaba zifakwe, kutuswa ukuba uhlole ibhethri futhi. Kodwa ukusebenza kule ngxenye.
Into wukuthi zonke amabhethri fraying. handling engafanele igajethi, kanye nokusetshenziswa omude phambili kudivayisi yokuthi ibhethri sekuqala kabi. Ngokuhamba kwesikhathi inqamuka. Bese ithebhulethi (noma ifoni, kuye ngokuthi hlobo luni igajethi okukhulunywa) ngeke besakwazi zifakwe.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukulungisa inkinga? Kuphakanyiswa ukuba:
Faka ibhethri noma ithebhulethi serviced. Kungenzeka ukuthi ibhethri kungenziwa lilungiswe.
Thenga ibhethri elisha futhi esikhundleni salo. Kakhulu elula, ethembekile futhi nandlela ukuxazulula le nkinga.
Akukho okunye kuzosiza. ibhethri Dead nje ngeke ukuqala. Uma uyobe ukulungisa noma ususe i-tablet izobuyela waphinda zifakwe. Yiqiniso, imali eyanele kwenkokhelo.
Is hhayi ngaphandle ezihlukahlukene uhlelo ukwehluleka. Abenzi lutho insured iyiphi idivayisi eyodwa. ASUS ithebhulethi ivaliwe futhi ingavuli? Ungazama ukusebenzisa okuthiwa isofthiwe kabusha. Ngaphezu kwakho konke, ukudedelwa zonke izilungiselelo zamagajethi. Inqubo ebizwa ngokuthi i "rezet Hard".
Susa kusuka kudivayisi zonke izingxenye ezengeziwe. Okungukuthi - iSIM khadi nememori khadi. Uma headset ixhunyiwe, izophinda kufanele ivulwe.
Cindezela amabhathini evolumu. Ukugcina kwabo babe imizuzwana engaba ngu-15. Can uyayekela lapho kunyakaza ukuqala.
Landelayo kuzodingeka ufake isethaphu uhlelo bese ukhetha khona "Ifomethi". Kuye imodeli tablet yakho amalebula olunembile zizohluka kwezabantu nomunye.
Linda kucutshungulwa isicelo. Ngemva kokuphothulwa kabusha, ungabuyela iSIM khadi nememori khadi endaweni, futhi zihlanganisa imishini.
Lolu khetho kuyasiza ngempela. Kodwa wenza kuphela uma icala nganoma yikuphi ukwehluleka uhlelo. Ngamanye eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa isofthiwe inqubo efanayo zingase zingasebenzi.
Kuyinto ibhethri evamile ukusebenza kule divayisi? ASUS ithebhulethi ayikwazi kuhlanganisiwe ngenxa neqiniso lokuthi wayeseholela inegciwane. Ngo abasebenzisi lanamuhla, le nkinga kwenzeka ezingasho njalo.
Lungisa isimo ingatholakala "rezet Hard". Kodwa hhayi yokuthi inqubo efanayo uzosebenza. Ngokuvamile, lapho utheleleke nge ezinye izinhlelo noma namanye amadivayisi kufanele bafune usizo nezikhungo zomsebenzi. Kukhona imali ukuze sibe nesizotha ithebhulethi azosusa ngayo amagciwane nezinye isofthiwe enonya.
Kunconywa emva ekuqedeni inkinga ukuthola mobile-anti-virus Uhlelo. Izoqhubeka ngeke bakwazi ukubhekana nale yokuthi akufakwanga ASUS ithebhulethi ngenxa amagciwane ahlasela le divayisi.
Igajethi akufakwanga? Kuwufanele ezindla onjani umthelela zangaphandle bafakela idivayisi. Ithebhulethi awukwazi ukusebenza ngenxa umonakalo lokukhanda. Futhi leli qiniso kufanele kucutshungulwe. Kuye ngezimo athathe isinqumo mayelana kulungiswe inkinga.
Ngokwesibonelo, uma igajethi kuwa emanzini, kumele sisuswe ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukuqaqa yomiswa. Ngemva kwalokho, ukuqoqa kanye usuzama ukusebenzisa. Ezinye izingxenye ezibalulekile kungalimala lapha ipuleti ekwindla. Bese idivayisi kuzodingeka iyokhandwa.
Ngakho-ke, lapho i-umthelela yangaphandle phezu izindlela igajethi ngcono isimo zingase zihluke. Ngokuvamile kuphela abakwazi ukuxazulula inkinga. Kodwa ukulungiswa ASUS Tablet ikuvumela ukuba bandise nokuphila igajethi iminyaka embalwa.
Firmware kumagajethi kungenzeka lilimele. Kanti kwezinye izimo lokhu kuholela yokuthi idivayisi ifakiwe ayisekho. A simo evame kakhulu.
Firmware ASUS Tablet kungenziwa kabusha ngokuzimela. Kodwa singazi batusa ngale ndlela. Kunoma yikuphi, umsebenzisi ongenalwazi naphula ngokuphelele negajethi.
Kunconywa ukufaka ithebhulethi ukukhanya isikhungo service. Inqubo ngokuvamile kuthatha cishe ihora. Ngemva ushintsho kudivayisi ukusebenza EEPROM ubuyiselwa ngokugcwele.
ASUS amaphilisi Izibuyekezo iyonke akhayo. Kodwa abanye imicabango yabantu zisikisela ukuthi phakathi mikhiqizo atholakala imodeli engaphelele. Okuningi ngokunembile, amagajethi ngabanye. Kuphakathi kokuthi azisebenzi noma yenze imisebenzi yabo ngokwengxenye, nokwehluleka nezinye eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa.
Indlela kulokhu? Umthengi uthenge idivayisi iphinde yathola ukuthi i-tablet ingavuli ASUS? Khona-ke kubalulekile ukuba ukuqhuba kokuxilongwa ezimele. It obukhomba imbangela yenkinga.
Uma isici yokukhiqiza kuqinisekisiwe, ithebhulethi kufanele ashiwo esitolo futhi banikana okwesikhathi analog zokusebenza. Kusukela isakhamuzi kuyodingeka ukuletha isheke, okubonisa iqiniso ukuthenga umkhiqizo. Ngokusho imithetho emisiwe kuyodingeka eRussia esikhundleni imishini engaphelele. Noma niwayise kumele kube nophenyo oluzimele.
Elungisa ukukhubazeka yokukhiqiza akukwazi. Thola imbangela yalesi kungenzeka ukungabi ukusebenza igajethi ngaphambili. Okungukuthi, umshado sivame ukwenzeka kuphela kumadivayisi entsha. Uma umsebenzisi ithebhulethi wachitha isikhathi esithile, zokwenqaba igajethi ukusebenza kungenzeka ziye zenzeka nangenxa yezinye izizathu.
Kunoma ikuphi, isakhamuzi kufanele bazi ukuthi amapuleti olungaphelele noma indawo esitolo mahhala noma uqashe kubo futhi ukuthenga ezintsha. Bona mended, njengoba kuye kwashiwo, akukwazi. Noma kunjalo, kufanele sikhumbule ukuthi ngisho noma lowo mshado uhlobo efanele umsebenzi zokukhiqiza, asikho isiqinisekiso inkonzo igajethi eside.
I-Tablet ASUS ZenPad ongafuni ukusebenza? Uma isimo uye kwavela kanjani ngengozi, ngaphandle izimfanelo ezidingekayo ukuze sizindle ingakanani idatha egcinwe kudivayisi.
A ezihlukahlukene ukwehluleka amathebulethi namafoni wonke amamodeli kuyagcinwa ngenxa ulwazi lomsebenzisi yokugcwala. Lena ejwayelekile, kodwa lithi akufanele njalo kakhulu.
I ipuleti angeke uvule uma ifakwe ivolumu imemori khadi kukhulu kunesono okunikezwe wumenzi. Ukusebenza umthamo zizobuyela ngemva zokukhohlwa ukubuyisa.
Futhi, i-tablet akufakwanga uma, njengoba sekuphawuliwe kakade, egcwele ulwazi. Ngokuvamile lokuqala lwenzeka ohlelweni ukubopha. Ithebhulethi aphendvule amasignali ethunyelwe isikhathi eside ngokwedlulele. Uma umsebenzisi engayinaki lezi zifiso, kungenzeka ukuthi manje noma ngokuhamba kwesikhathi, idivayisi nje ongafuni ukusebenza. It ngeke usaba zifakwe. Khona-ke kufanele ngandlela-thile khulula isikhala. Kungaleso sikhathi kuphela lapho futhi isebenze kahle nge-tablet yakho noma ifoni.
Yiziphi iziphetho kungenziwa kumuphi okuye kwashiwo ngaphambilini? Zonke kumadivayisi eselula basengozini kakhulu. Tablets, njengazo zonke ezinye izinto ukuthi kungenzeka zifakwe ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo:
yaphela Ukushaja ibhethri;
uhlelo Idivayisi ngamagciwane;
ukwehluleka izingxenye ezithile ze-tablet.
Ilungiselela ASUS ithebhulethi - kuyisihluthulelo ukuhlinzwa evamile zedivayisi. Wenziwe, ngokuvamile bebodwa. Yangempela esimweni "rezet Hard". Ngemva iqoqo olunzulu kuyodingeka wenze kulungiselelwa igajethi njengoba kuyinto elula umsebenzisi. Kodwa reflash kangcono uzule izikhungo inkonzo. Kukhona futhi Kunconywa ukuthatha ithebulethi uma ungayiqondi ngokwakho, kungani ungaphendukeli ku negajethi.
Cedar emgqonyeni: ukubuyekezwa kanye incazelo yenqubo
Amapayipi amachiza angama-hydraulic - izinhlobo, izinzuzo, ububanzi
Alopecia ehlasela umzimba: izindlela emzabalazweni kanye umphumela zokwelapha omuhle